သုတ်ရည်လွှတ်မှု - ဘယ်လောက်များများကျန်းမာရေးကောင်းသလဲ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဖိုရမ်တွင်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ရုန်းကန်လာကြသည်။ သူတို့က ဦး နှောက်ကိုပြန်ကောင်းလာအောင်တားဆီးတာဟာမကြာခဏဆိုသလိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့နားလည်လာကြတယ်။ (အစပိုင်း၌သူတို့၏လိင်မှုနှိုးဆွမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် Flashbacks များ၌အလွန်တင်းကျပ်စွာချိတ်ဆက်ထားသဖြင့်ယခင်အော်ဂဇင်ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းကိုမြန်စေနိုင်သည်။ Bing.)
ဆွေးနွေးချက်တွေသဘာဝကျကျမကြာခဏသုက်လွှတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်လိုအပ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သညျထ။ အံ့သြစရာအဖြေကိုမသဘောတူညီမှုလည်းမရှိ။ လူကြိုက်များ lore ဆုံးနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများကများ၏အမြင်များအကြားကျယ်ပြန့်ကွာဟမှု, သို့သော်, ရှိပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာပြန်ဖြတ်တဲ့သူယောက်ျားမကြာခဏအပြောင်းအလဲများအပေါ်သဘောထားမှတ်ချက်: ပိုပြီးစွမ်းအင်, ပိုကောင်းတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု, ပိုမိုလွယ်ကူစွာအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်, လေ့ကျင့်ခန်းထဲကနေ သာ. ကြီးမြတ်အကျိုးအမြတ်, ပိုမိုအားကောင်းစိုက်ထူကျန်းမာအစားအသောက်စသောအပြောင်းအလဲအစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမှပြန်လာပိုမိုအကောင်းမြင်, မြင်နေအမျိုးသမီးတွေကွဲပြားခြားနား-ပင် နက်ရှိုင်းအသံ။ ဘဝ၏အခြားရှုထောင့်နှင့်အတူအမျှ, တကအလယ်တန်းမြေပြင်ကိုရှာတွေ့ချေပုံရသည်။ ကသုတ်ရည်လွှတ်မှကြွလာသောအခါရသေး, လူအနည်းငယ်ကျန်းမာအလယ်မြေပြင်ကိုဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်သို့သောအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
အမေရိကန်ကျောင်းဝင်းဘဝအပေါ်သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်, ငါ Charlotte Simmons AmTom Wolfe က“ ယောက်ျားလေးများသည်၎င်းတို့သည်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပုံကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြသည်။ မကြာသေးမီကဗြိတိသျှအာဏာပိုင်များသည်ကလေးငယ်များအားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအားပေးတိုက်တွန်းရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည် -တစ်ခုက orgasm တစ်ဦးကနေ့ဆရာဝန် Away သိမ်းထားပြီး။ " သူတို့ကနေ့စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည်ဟုပြောဆိုခြင်း မှလွဲ၍ အကျိုးရှိသည်ကိုသက်သေမပြခဲ့ပါ။ (ဒါကြောင့်လှေကားတက်လမ်းလျှောက်ပါဘူး။ )
တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောသဘောတူညီမှု၏မရှိခြင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏသုက်လွှတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောင်းကြားပြီးလျှင်, များစွာသောလူတို့သညျယခုသူတို့အသံကအကြောင်းပြချက်များပင်လျှင်, အချိန်ပြန်-ပင်ဖြတ်ဖို့စိုးရိမ်နေကြသည်။ သူတို့ကသုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေကိုထိန်းသိမ်းရန် / တိုးမြှင့်ဖို့အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှုနျးနိုငျသညျ။ (ကို restart ကျသောအခါ) အခြို့ကိုလညျးသုတ်ရည်လွှတ်ရှောင်ရှားအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားထက်အသိအမှတ်ပြုအဖြစ်ဆုတ်ခွာအီမှားယွင်း ဆုတ်ခွာအဆင်မပြေ ချိန်ခွင်လျှာဖို့ပြန်လာတစ်ခုလွှဲမရှောင်သာအဆင့်အဖြစ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသော်လည်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်သည်အချို့သောယောက်ျားများ၏လိင်မှုဘ ၀ ကိုစစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်ဝေးကွာသွားစေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အသစ်သောလိင်မှုကိစ္စလှုံ့ဆော်မှုများသည်မိတ်ဖက်လိင်များထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးမကြာခဏနှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းသောကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရသည် သုက်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုနေတယ်သုက်ပိုးတိုးပွါး။ ဒါ့အပြင်အချိန်ကိုကသိသိသာသာလျှောက်လျော့နည်း ejaculate မှကြာပါသည်။ တိုတို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းခုနှစ်တွင် (များစွာကို porn အသုံးပြုသူများကိုအဆက်မပြတ်ဝတ္ထု erotica ရှာကြံသတင်းပို့) ကိုပိုမိုမြေသြဇာကောင်းသောသုတ်ရည်၏အသုံးစရိတ်နှင့်ပိုမြန်သုတ်ရည်လွှတ်သို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ တစ်ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာသုတေသနလည်းတစ်ခုစွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်, ဦးနှောက်ထဲမှာ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ် circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုပြသထားတယ်။
ယနေ့ပြုလုပ်သောလှုံ့ဆော်မှုသည်အသုံးပြုသူများအားလူ့အသိုက်အ ၀ န်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ဒါကကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ မျောက်ဝံများသည်ရယ်စရာကောင်းသည်။ sexy bonobos နှင့်သူတို့၏ဝမ်းကွဲများက macaque မျောက်များပင် မကြာခဏသုတ်ထုတ်ကြပါဘူး သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံရသောအခါ။ ဒါဟာမျောက်ဝံများသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်-ထက်မျှသာသုတ်ရည်လွှတ်ဝေဒနာတွေသောလူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်များအတွက်လိင်လိုအပ်ပုံရသည်။ တကယ်တော့, နှစျသိမျ့အဆက်အသွယ် pair တစုံ-Bond ဘို့ ပို. ပင်အရေးပါသောအဖြစ်နိုင်သည် ငါတို့ကဲ့သို့ဦးနှောက်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သိပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွတကယ်ကလူစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ် ဒီထက်ရောငျ့ရဲ.
အရာတစ်ခုမှာအချို့ဖြစ်ပါတယ်: ဒါဟာသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရည်မှန်းချက်သတင်းအချက်အလက်ချွတ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးကြာပါသည်။ တဦးတည်းလူငယ်လေးကပြောပါတယ်,
ငါမကြာခဏသွားလေ့ရှိသောအမျိုးသားများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုနံပါတ်တစ်ဆင်ခြေပေးခြင်းသည်ဆီးကျိတ်အတွက်ကောင်းသည်။ သငျသညျလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောလူကိုပြောခြင်းကစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကသူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မကြာခဏဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုအမှန်တကယ်တားဆီးသလား။
စပ်စု, ငါ့ခင်ပွန်းနဲ့ငါအဖြေများအတွက်ဝန်းကျင်ကိုတူးစတင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များမဟုတ်ဘဲအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ကိုက်ညီမှုရှိကြ၏။ ၏သုတေသီများအဖြစ် လေ့လာမှုတစ်ခု အမျိုးသားများ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ဖော်ပြချက်ကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့်မကြာခဏကိုးကားထားသည်။ “ လေ့လာမှု ၉ ခုသည်စာရင်းအင်းအရသိသာထင်ရှားသော (သို့) သိသိသာသာအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။3လေ့လာမှုများအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံခဲ့သည်; လေ့လာမှု (၇) ခုသည်စာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသော (သို့) သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုမရှိသောဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နှင့်လေ့လာမှုတစ်ခု U-shaped ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "
လေ့လာမှုတစ်ခုအရတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတစ်မျိုးတည်းသည်သုတေသီများနောက်ဆုံးမှ ၂၀၂၀၊ ၃၀ နှင့် ၄၀ နှစ်များအတွင်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုမြင့်မားရန်ညွှန်ပြခဲ့သည်။ penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု (PVI) မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလှုပ်ရှားမှုခွဲခြား။ PVI ဖြစ်သက်သေပြ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သော အသက်အရွယ်နုပျိုသောအမျိုးသားများတွင်သက်ရောက်မှုအတွက်အသက်ကြီးသူများနှင့်ကြားနေအတွက်ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေး၏။ တစ်ဦးက ပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု (သေစေလောက်နှုန်းထားများထိခိုက်ခဲ့ကြသည်) ပိုပြီးမကြာခဏသုက်အတွက် 19% လျော့နည်းသည် non-သေစေလောက်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်များစွာသောမေးခွန်းများကိုထိုကဲ့သို့သောသုတေသီများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည်အခြားဘယ်အရာကိုအဖြစ်ဖြေရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကူးစက်ရောဂါတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည် ပိုပြီးဆီးကျိတ်-ကင်ဆာတရားခံ သုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေထက်။ တဦးတည်းကောင်လေးကလည်း,
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (orgasm) နှင့် ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်သောယုံကြည်ချက်များစွာရှိသည်။ ဥပမာ - 'တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းက testosterone ဟော်မုန်းကိုများစေသည်။ ' မင်းသာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေမယ်ဆိုရင်မင်းကဒါမျိုးမလုပ်နိုင်တော့ဘူး (မာရိသညျအကွောငျးအရာတစ်ခုခု): 'and' သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေမနေပါက testosterone ဟော်မုန်းပိုများလာပြီးဆံပင်ကိုလည်းဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ '
"ငါသုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေများနှင့်ဆီးကြိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်ကြားက (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) တစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုဖေါ်ပြခြင်း၏သိသောအဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုအကောင်းရည်ရွယ်ချက်ဒေတာရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အန်ဒရိုဂျင်နှင့်သူတို့, သင်တန်း, တစ်ဦးဆီးကျိတ်ကင်ဆာအလွန်နိမ့်ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အော်ဂဇင်၏ယူဆရစိတ်ဓာတ်ကြိမ်နှုန်းရှိသည်။ "ကြသူ MtF, များအတွက်ဒေတာပြန်လည်သုံးသပ်
(ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိုထောကျပံ့ပေမဲ့) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပျေါမှာကျနော်တို့တကယ်တော့, သုတ်ရည်လွှတ်မပေးကြောင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အပေါ်အရေးပါသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသင်ယူခဲ့တယ်။ အော်ဂဇင်ကနေရှောင်သောအခါအ testosterone အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထိုသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု-မတိုင်ခင်ပုံမှန်ဆင်းပြန်ရုတ်သိမ်းစဉ်အတွင်းအနည်းငယ်မြင့်တက်ပါဘူး။ (သာမန်လူ့ယောက်ျားအတွက် orgasm ကြိမ်နှုန်းနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်) ဒါဟာအစ spikes ပြီးတော့န်းကျင်ကိုပြန်ကျဆင်းသွား သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်တစ်ရက် 7, ထိုအော်ဂဇင်ကိုညွှန်းကိုအနည်းဆုံးတစ်ပါတ်ကြာတဲ့သိမ်မွေ့ဟော်မုန်းသံသရာအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သူကပြောပါတယ်, ယောက်ျားမကြာခဏသုက်လွှတ်အောက်ပါလကျထကျနဲ့ရက်သတ္တပတ်ကျော်ကလိင်စိတ်နှင့်စွမ်းအင်အတွက်အလွန်စစ်မှန်သောအပြောင်းအလဲများသတိထားမိ။ အဲဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ပေးဖြစ်ကောင်းထဲမှာသော့ချက် neurochemicals ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အာရုံကြောဆဲလ် receptors နှင့်အတူလုပ်ဖို့ပိုရှိသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် circuit ကို သူတို့သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုပြုသဖြင့်, ထက်။
အဆိုအရ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၏“ NakedScientist” ဖိုရမ်,
မကြာသေးမီကဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကသူ၏ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုကိုဤမေးခွန်းကိုမေးခဲ့သည်။ ဆရာဝန်က“ မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း” မရှိသည့်အခါလူ၏စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကြားကာလသည်ကောင်းမွန်သောလမ်းပြဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်စိတ်ရှည်သည်းခံပြီးအိပ်မက်နှစ်ခုမက်သည့်တိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းရန်လူနာအားအကြံပေးခဲ့သည်။ မည်သည့်အသက်အရွယ်ပင်ဖြစ်ပါစေမျိုးပွားမှုကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်အဖြစ်ရရှိသောကြားကာလကိုအကြံပြုခဲ့သည်။
ဆရာဝန်ကဂလင်းတွေကကြွက်သားတွေမဟုတ်ဘဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ရှင်းပြတယ်။ ဂလင်းများမှအရည်များအားလုံးကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လွှတ်သည် (ဥပမာ - စိုစွတ်သောအိပ်မက်များ) နှင့်လက်ဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည်အချိန်ကုန်တစ်ခုကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဂရုစိုက်ပါကသူ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်သူ၏သုတ်ရည်လွှတ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုသူ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်ဟုစိတ်ချနိုင်သည်။ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်ကဆက်ပြီး
ကျွန်ုပ်သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်မကသောစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမမက်ခဲ့သောကြောင့် (အမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်) ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်အား“ ကျွန်ုပ်သည်စိုစွတ်သောအိပ်မက်မရှိပါကမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း” ဟုမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူက“ ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုသုက်ထုတ်ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူး” လို့ပြန်ဖြေတယ်။
မကြာခဏသုတ်ရည်လွှတ်ကဲ့သို့သောအရာရှိပါသလား? လိင်မှုဗေဒပညာရှင်များ၏ရှုထောင့်ကအထွတ်အထိပ်သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သူမျှအကြာကြီးသုတ်သင်ခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊
ကံမကောင်းစွာဖြင့်လူအားလုံးသည်ထိုအချိန်တွင်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားသည်မဟုတ်ပါ။ သုတ်ရည်လွှတ် compulsive ဖြစ်လာသည်။ (အမေရိကန်လူမျိုးသုံးပုံတစ်ပုံသည်အစာစားခြင်းကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်ပြီးအဝလွန်ခြင်းမပြုကြသကဲ့သို့) ဥပမာ၊ အွန်လိုင်း Onania Support group ကိုသူတို့၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြရန်နှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများကိုအသိအမှတ်ပြုသောအမျိုးသားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အုပ်စုသည် ၄ ​​င်းတို့၏တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သုက်ပိုးမွှားနိုင်ခြင်းအတွက်ဟူသောဝေါဟာရကို“ copulatory impotence” ကိုပင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ရှင်းနေသည်မှာသူတို့၏အလောင်းများပြုခဲ့ကြသည် မဟုတ် သုတ်ရည်လွှတ်နှငျ့ ပတျသကျ. Self-ထိန်းညှိ။ ကောင်းမွန်သောသတင်းကဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် Reversible လုပ်.
လေ့လာမှုအရသန္ဓေတည်ခြင်းအလွန်များခြင်းသည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည်“ ဆယ်ရက်အတွေ့အကြုံ” ရရှိပြီးတစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ၂.၄ ကြိမ်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းသည်ကြိုတင်ထုတ်ယူမှုအဆင့်ထက်နိမ့်ကျသည်။ ကျော်ကိုငါးလ။ ဦး နှောက်ထဲတွင်အခြားသက်ရောက်မှုများရှိသေးသည်မှာဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသန မပြီးသေးဘူး.
ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းမလိုအပ်သောဆငျးရဲဒုက်ခဖြစ်စေတဲ့နိုင်ပါသည်။ ထဲမှာဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျားရာပေါင်းများစွာယခုသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည် post-orgasm ဖြားနာ Syndrome ဖိုရမ်။ မကွာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်စိတ်ရောဂါအော်ဂဇင်ပြီးနောက် neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုတခါတရံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောမှတ်ချက်ပြု စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန် မဟုတ်ရင်စိတ်ခံစားမှုကျန်းမာလူနာ၌တည်၏။ မကြာခဏသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းအပေါ်ယနေ့အလေးပေးခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုစည်းကမ်းမဲ့ဖြစ်စေသည်။
အလွယ်တကူဖတ်လို့ရအောင်အပိုင်းသို့စီစဉ်ရရှိနိုင်သိပ္ပံ, စူးစမ်းဖို့, ထုတ်စစ်ဆေး ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်အချက်များ by ကင်ဆာသုတေသနဗြိတိန်။
ဆောင်းပါးတွေကိုမှတ်ချက်: YBOP သင်တို့အဘို့ဆိုးရွားကြောင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုမပေးပါ။
ကိုယ့်ဒါခေါ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ၏များစွာသောအမှတ်အောင် ပြောဆိုထားသည် အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့တကယ်တော့အခြားလူသားမဟုတျဘဲအော်ဂဇင် / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူအနီးကပ်ထိတွေ့နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ ပိုများသောအထူးအနည်းငယ်အထီးကျန်ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်အော်ဂဇင် (မှန်လျှင်) အကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်ကောင်းသဘာဝကျကျပိုပြီးလိင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကျန်းမာသန်စွမ်းလူဦးရေကနေဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ပြောဆိုထားသည်။ သူတို့ကကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်။ သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ:
ကွဲပြားခြားနားသောလိင်လှုပ်ရှားမှုများ (2010) ၏ဆွေမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဟုတ်ခဲ့စဉ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း, အပြုသဘောသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအဆိုးဆက်စပ်ခဲ့ - ကိုပိုမိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆင်းရဲတဲ့ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းအဓိပ္ပာယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံး:
ဖိုရမ်မှတ်ချက် - NoFap အကြောင်းမင်းရဲ့ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအရတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အဓိကဆရာဝန်နှင့်ယနေ့ပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါ့မှာစိတ်ကျဝေဒနာတွေအပါအ ၀ င်ငါ့ရဲ့ဘဝအများစုအတွက်ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူကငါ့ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကိုသူ့တုန့်ပြန်မှုမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။
လူအပေါင်းတို့၏လက်သီး, ငါ့ဆရာဝန်ကိုသင် masturbate သို့မဟုတ်မရှိမရှိဆုံးဖြတ်မျှမတိကျတဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များရှိပါတယ်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ တချို့လူတွေကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆီးကျိတ်ပြဿနာများကိုတားဆီးကူညီပေးသည်ဖြစ်စေတောင်းဆိုမှုများကိုလြော့, ငါ့ဆရာဝန် said:
'' ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကာကွယ်ဖို့မင်းကိုမကြာခဏသုတ်ထုတ်သင့်တယ် '' လို့ပြောရင်ကောင်းမယ်။ ဒါမမှန်ပါဘူး
-Dr ။ Grayson, DO, 1 / 8 / 13
အကြှနျုပျ၏ဆရာဝန်တိုင်းဒါမကြာခဏကြောင့်အတိတ်တွင်အနိမ့်စမ်းသပ်ပြီးကတည်းကသွေးစစ်ဆေးမှုနဲ့ငါ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။ ကပြောင်းလဲမှုငါ့ကိုက 90 ရက်ကြာ NoFap (woot!) မှထက်ဝက်လမ်းအောင်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်လျှင်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်, သူကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအသုံးပြုမှု testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမသက်ရောက်ရန်အနည်းငယ်သာရှိပြီးသူ၏ထင်မြင်ချက်အားကြီး။
ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်လျက်ရှိသည်ထွက်ဖြတ်တောက်ခံစားရသောငါ၏ဆရာဝန်ကိုပြောပါတယ်သည့်အခါနောက်ဆုံးတွင်သူဖျော, ခေါင်းတညိတ်ညိတ်:
“ ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကသူတို့ကိုကူညီပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်၏လူနာများကကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုယုံကြည်ပါသည်” \_ t
ကျွန်ုပ်သည်အံ့အားသင့်မိပြီးဤပြaboutနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဆရာ ၀ န်ကိုပြောခဲ့သူတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးအားတက်မိသည့်အတွက်အားရကျေနပ်မိသည်။ အားရှိကြလော့။ ခက်ခက်ခဲခဲသိပ္ပံပညာကဒီကိစ္စကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပေမဲ့ဆရာ ၀ န်တွေကသူတို့ရဲ့လူနာတွေကိုနားထောင်နေပြီးငါတို့ကဲ့သို့တူညီတဲ့ကောက်ချက်တွေချနေကြတယ်။